merolagani - स्वरोजगार लघुवित्त र रिडी हाइड्रोपावरको बोनसपछि सेयरमूल्य समायोजन
स्वरोजगार लघुवित्त र रिडी हाइड्रोपावरको बोनसपछि सेयरमूल्य समायोजन
Sep 23, 2018 Merolagani
स्वरोजगार लघुवित्त र रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको बोनसको बुकक्लोजसँगै दुबै कम्पनीको आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेमा सेयरमूल्य समायोजन भएको छ ।
स्वरोजगार लघुवित्तको २० प्रतिशत तथा रिडी हाइड्रोपावरको ६ प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात सेयरमूल्य समायोजन भएको हो ।
नेप्सेले २० प्रतिशत बोनस सेयर समायोजन गरेर स्वरोजगार (SLBBL) काे प्रतिकित्ता सेयरमूल्य ७५९ रुपैयाँ ९ पैसा निर्धारण गरेको हाे । समायोजन मूल्यलाई आधार मानेर कम्पनीको आइतबार सेयर कारोबार खुला भएको छ । लघुवित्तको १८० दिनको कारोबारको आधारमा औसत आधार मूल्य १०४५ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
लघुवित्तले वार्षिक साधारण सभाको बोनस वितरण गर्न शुक्रबारदेखि बुक क्लोज गरेको थियो । असोज २० गते डाकेको सभाले २० बोनस र कर प्रयोजका लागि १.०५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
त्यसैगरि रिडी हाइड्रोपावर (RHPC) को ६ प्रतिशत बोनसपछि प्रतिकित्ता ११४ रुपैयाँमा सेयरमूलय समायोजन भएको छ । समायोजन भएको मूल्यको आधारमा रिडीको आइतबार सेयर कारोबार खुलेको छ । नेप्सेले १८० दिनको कारोबारको आधारमा औसत आधार मूल्य १७४ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण भएको जनाएको छ ।
असोज २० गते डाकेको १७ औं बार्षिक साधारण सभाका लागि कम्पनीले आइतबार एक दिन बुक क्लोज गरेको हो । सभाले बोनस पश्चात कायम चुक्ता पूँजीको एक बराबर अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गर्दैछ ।
त्यस्तै ८.५ मेगावाटको बुटवल सोलार आयोजना निर्माण गर्न ऋण लिने प्रस्ताव पनि साधारण सभाको एजेन्डा छ ।
दर्जन कम्पनीद्धारा साधारण सभा आह्वान, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले पाउँछन् लाभांश ?
प्रभु इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य समायोजन
Jan 24, 2020 11:29 AM
एनसीसीको शेयरमूल्य समायोजन
Jan 21, 2020 07:56 AM
सिर्जना फाइनान्सको शेयरमूल्य समायोजन
Jan 17, 2020 08:06 AM
स्वाभिमान लघुवित्तको शेयरमूल्य समायोजन
Jan 10, 2020 08:43 AM
लुम्बिनी विकास बैंकको शेयरमूल्य समायोजन
Jan 08, 2020 10:41 AM
समता लघुवित्तको शेयरमूल्य समायोजन
Jan 05, 2020 09:34 AM
माैद्रिक नीतिकाे अर्धबार्षिक समीक्षामा शेयर कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत माथि लैजान लगानीकर्ताकाे माग
Jan 26, 2020 06:36 PM
शेयर कर्जाको माग घट्दै गएपछि शेयर बजारका लगानीकर्ताले शेयर कर्जाको सीमा बढाउन माग गरेका छन् । अन्य क्षेत्रको सीमा बढाउने कुरा उठेपछि उनीहरूले शेयर कर्जाको मार्जिन सीमा पनि बढाउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरसको असरः विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने खतरा !
Jan 26, 2020 06:07 PM
तत्काल भन्सारको महसुल दर घटाउन सकिँदैन : अर्थमन्त्री
Jan 26, 2020 05:42 PM
सभामुखमा सापकोटा निर्वाचित
Jan 26, 2020 05:15 PM
सभामुखको निर्वाचन हुँदै
Jan 26, 2020 04:05 PM
बदलीसँगै वर्षाको सम्भावना
Jan 26, 2020 03:58 PM